श्रीमानले २ वर्ष अघि नै गरेका थिए सुटुक्क परिवार नियोजन, श्रीमतीले भनिन् ‘म गर्भवती भएँ’ – Classic Khabar
September 6, 2021 93
श्रीमानले दुई वर्ष अघि नै परिवार नियोजन गरिसकेका थिए । तर उनको श्रीमतीले श्रीमानलाई गर्भवती भएको खबर सुनाइन् । श्रीमतीले श्रीमान खुसी होलान् भनेर खबर सुनाएकी थिइन् । तर उनको त्यो खबरले श्रीमान भने झस्किए । श्रीमानले दुई वर्ष अघि भ्या’से’क्टो’मी गराइसकेका थिए ।
यो घटनापछि उनले स’ल्लाहको लागि सामाजिक प’राशर्म सा’इट रे’डिटको स’हारा लिएका छन् । डेली स्टारका अनुसार यी व्यक्तिले रे’डिटमा सल्लाह माग्दै प्रश्न गरेका छन् कि यो बच्चा वास्तवमा उनको हो कि होइन ।रि’लेशनसिप फो’रममा उनले लेखेका छन् ‘मेरी पत्नीले बताइन् कि उनी ग’र्भवती छिन् ।
तर, मैले २ वर्षअघि भ्या’सेक्टोमी गराएको थिएँ । यो बच्चा मेरै हुने कति सम्भावना छ ? के उनको अरु कोही त्यो बच्चाको बुवा हुनसक्छ ? धेरै समयदेखि हामी एकसाथ बसिरहेका छौं र हामी धेरै राम्रोसँग संवाद गर्छौं । मलाई विश्वास लाग्दैन कि उनले मलाई धो’का दिइन् होला ।
तर, ब’न्ध्याक’रणपछि मलाई यकिनका साथ थाहा छैन कि ग’र्भव’ती हुने कति सम्भावना छ ।’उनले अनलाइनमा यस विषयमा मिश्रित रि’भ्यु पाएको बताउँदै अहिले आफूले टु’क्रिएको महसुस गरिरहेकोले सहयोग गर्न भनेका छन् । उनको पोस्टले ११ सयभन्दा धेरै भोट पाएको छ र सयौंले उनलाई सल्लाह दिएका छन् ।
धेरैजसोले उनलाई पत्नीमाथि आरोप लगाउनुभन्दा पहिले आफ्नो स्प’र्म का’उ’न्ट’को जाँच गराउन भनेका छन् । उनलाई डाक्टरहरुले पनि सल्लाह दिएका छन् ।केहीले प्र’तिक्रिया दिँदै आफूले यसअघि पनि पुरुष स्थायी ब’न्ध्या’क’र’ण वि’फल भएका व्यक्तिहरु देखेको बताएका छन् । एक युजरले लेखेका छन् ‘म एक डाक्टर हुँ ।
मेरा एक बि’रामी थिए जसकी पत्नी पतिको ब’न्ध्या’क’र’णपछि पनि ग’र्भव’ती भएकी थिइन् । यो निकै दु’र्लभ हो तर असम्भव होइन ।’ अर्का एक यु’जरले कुनै पनि निष्कर्षमा पु’ग्नुभन्दा पहिले डाक्टरकहाँ गएर परीक्षण गराउन भनेका छन् । एक युजरले डि’ए’न’ए परीक्षण गर्न भनेका छन् ।
Prevमाधव नेपाललाई धोका दिएर एमाले छिरेका १० नेता यता न उताका ? इश्वर पोखरेलले गरे यस्तो खुलासा
Nextसर्प बिज्ञले यसरी पक्रनु पर्छ सर्प भनेर सिकाउँन खोज्दा करेट सर्पले टोक्यो हेर्नुहोस भिडियो
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, भाद्र ६ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल